Maxkamadeyn nooceeda horey loo arag oo Iswedhen ka bilaabatey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maxkamadeyn nooceeda horey loo arag oo Iswedhen ka bilaabatey
La daabacay onsdag 12 juni 2013 kl 10.52
Sawirka 20 sanno jir ay horey jir-dil ugu geysteen afduubayaasha ku sugan Siinaay. Foto: Pernilla Palm / Sveriges Radio
Maanta ayaa waxaa bilaabatey maxkamad aan nooceeda oo kale weli horey u soo marin dalka Iswedhen. Labo nin ayaa lagu soo oogey dacwed ah iskudey baad foolxun. Keyskaan ayaa la xiriira afduubyo waxuushnimo ah oo loogu geystey qaxootiga Eritreanka ah oo lagu afduubo saxaraha Siinaay dalka Masar, kuwaas oo loo geysto xadgudubyo naxariis daro ah, sidoo kalena qaraabadooda ku sugan caalamka daafahiisa laga dalbado in ay lacag baad ah bixiyaan.
Labo nin oo degan dalkaan Iswedhen ayaa hada maxkamad la xiriirta in ay gacan ka geysteen oo ay gudbiyeen dalabyada baada ah lagu soo oogey. Nimankaan ayaa dalabka afduubayaasha Siinaay ku sugan ka soo qaadey fartiinta dalabka lacagta baada ah kuwaas oo u gubiyey haweyney Eritrean Iswedhisha ah. Lacagta afduubayaasha haweynda ka dalbadeen in ay baxiso ayaa aheyd 33.000 oo dollarka Mareykanka, hadii kale ay ninkan ay ku afduubeen Siinay uu dhibanayo xubnaha jirkiisa ay la baxyaan oo sidii gadanayaan.
Falalka noocaan ah ee lagu afduubo qaxootiga maraya saxaraha ayaa ah arin dhowrkii sanno ee ugu denbeysey soo socotey. Amnisty International ayaa sheegtey in fallka noocaan ah ay soo socdeen laga soo bilaabo sannadkii 2009. Waxaana lagu qiyaasayaa dadyowga afduubka noocaan loogeystey tiradooda 7.000 oo ruux halka 4.000 oo kamid ah dadkaas ay geeriyooden intii ay gacanta afduubayaasha ku jireen, sida uu qorey wargeyska New York Times. ”Arinta aan weligeed horey u dhicin oo ka dhigeysa maxkamada hada ka bilaabatey Iswedhen mid aan horey nooceeda loo arag ayaa ah in aan weligeed ruux baad la xiriirta dadyowga saxaraha lagu afduuba aan weligeed maxkmad lagu soo taagin Yurub” sidaas waxaa yeri Simon Andrea oo ka tirsan laanta wararka Ekot oo maanta ku sugan maxkamada Solna tingsrätt oo ah halka lagu maxkamadeynayo labada nin.
Labada eedeysane ayaa inkirsan danbiga loo heysto. Qareenka mid ka mid ah labada nin; Olle Hankock oo arintaas ka hadlayana waxuu yeri sida tan:
- Markii hore wuu inkirey bilowga iyo dhamaadka danbiga lagu soo eedeeyey. Waxuuna sheegey in uusan ka warqabin in arinta dalabka lacagta ay ku sal laheyd afduub. Marna asaga iskuma arag ruuxa lacag baad ah dalbanaya, ayuu yeri qareenka 21 sanno jir kamid labada nin ee dacwada lagu soo oogey.
Laakiin haweeyneyda ragaan dacweysey ayaa bixineysa sawir sheegashada raga ka gedisan. Haweeyneyda ayaa ku guuleysatey in ay duubto cod raga marka ay ka dalbanayeen lacagta baada ah. Haweeneydaan oo la yiraahdo Meron Estafanos oo arintaas sharaxeyseyna waxey tiri sida tan:
- Waxaan helay SMS ay ku qorneyd ” waa aniga ruuxa lacagta 33.000 ee dollar kaa qaadaya, taas oo af-ingriis ku qorneyd. Markaas ayaan wacay ruuxa SMS:ka soo direy oo aan ku iri waan hayaa lacagta ee ma damaanad qaadi kartaa in ninka aan qaraabada nahey asaga oo bedqaba soo deyneysiin. Waxuu markaas yeri maxaad ka wadaa? Anaga ma ogi waxaad ka hadleysid. Waxaana ku iri arintaan waxay ku sabsantahey nin aan qaraabo nahay oo ay afduubeen beduinka Siinaay degan.
Raga ayaa ku doodey in aysan ka warqabin lacagta laga dalbadey in ay haweeneyda ka soo qaadaan waxa ay ku saabsaneyd. Laakiin Miron Estafanos ayaa sheegtey in ay u cadeysay waxa ay lacagta ay ku sabsan tahay oo aysan waxbo ka jirin sheegashadooda.
- Waan u cadeeyey waxay ku saabsaneyd markasta oo ay isoo wacaan, dhamaan hadaladii nadhex marey waan duubey. Maalin aan wacay ayaa waxaan ragaan ku iri "lacagtaan waxey ku sabsantahay ruux qaraabadeyda ah oo la afduubey, jir-dilna loogeystey". Markaas waxay iigu jawaabeen "anaga waxba kalama sacono arintaas waxbana nagama gelin".
Qaar kamid ah fartiimo sms ah oo ay ragaan u direen haweeneyda:
” Waa aniga shaley kula hadlay, ma geysey lacagtii weli? Beri ayaan Masar aadeyaa, maxaan u sheegaa dadka, lacagta anoo wada maan tegaa mise la’aanteed?
" Dhageyso nus saac ayaad heystaa in aad lacagta heysid oo aad ila kulantid, waa fursadii kuugu denbeysey, hadii kale arinta oo dhan iska hilmaan”.
Markey ku jawaabtey in aysan lacagta oo dhan heynin, waxaa loo soo direy fartiintaan qoraalka ah:
"Iska hilmaan arinta oo dhan, u isticmaal lacagta xabaasha, nabadeey”
Hadii aad heysid xog ah ruux arintaan oo kale ay ku dhacdey fadlan nala soo xariir ciiwaankan. codka@sr.e ama telefoonka +46-8-784 45 525.